Inviting the Celebration of Burma Resistance Day, Burma Democratic Concern (BDC) Founding Anniversary & Ko Myo Yan Naung Thein's Birthday
Posted by ビルマ民主の懸念 at 12:18 No comments:
ビルマ民主の懸念（BDC）が温かみのある政治犯の何百ものリリースを歓迎。アウンサンスーチー氏のリストによると、囚人を支援し、全国の刑務所訪問しているビルマの内側AOS NLDのネットワーク - 番号が約最も近いもビルマで591政治犯が存在することをNLDが記載されています。ビルマ民主の懸念（BDC）は、NLDのリストに従って、政治犯を解放するために政府の決定を歓迎し、我々は、政治のNLD、AOSリストと調和して政治犯のすべての残りの部分を解放するためにUテインセイン体制が求め囚人。
ビルマ民主の懸念（BDC）は、ビルマのためにビルマに課された制裁の東南アジアのどの国よりも外国からの援助金を受け取る学ぶことは非常に悲しいです。隣接しているラオスでは$ US64.4を受信しながらたとえば、2009から10ビルマで海外開発援助（ODA）の一人当たりたったの$ US7.2を受け取ります。特に国際社会は、健康と社会福祉の技術支援をブロックするすべての制裁を削除する必要があります。ビルマ民主の懸念（BDC）は非常に西洋諸国による制約などにも教師や医療従事者に研修を提供するものとしてどのような援助を提供すること禁止するため、そのうち、政府の任意のメンバーに到達するの支援を禁止することを知ってショックを受ける。
Posted by ビルマ民主の懸念 at 12:42 No comments:
- ビルマにおける失業、貧困、インフレを緩和する。 - 汚職、権力の乱用、法律上の誰とビルマで正義を買いに完全な終止符を打つ。
Posted by ビルマ民主の懸念 at 07:14 No comments:
Posted by ビルマ民主の懸念 at 14:31 No comments:
Burma Democratic Concern (BDC) Director Myo Thein Speech on 23 Anniversary of Military Coup in Burma.
Burma Democratic Concern (BDC) http://bdcburma.org/Statements.asp?Id=133 strongly denounced the Irresponsible USDP Regime Failing to Save River Ayeyarwaddy. Burma Democratic Concern (BDC) strongly denounced the USDP's Electric Power Minister U Zaw Min's irresponsible comment saying there is no plan to stop building the Ayeyarwaddy Dam instead the government is pledged to finish building it in the wake of widespread objections.
People of Burma including democracy leader Daw Aung San Suu Kyi are calling for to review the Ayeyarwaddy Dam project due to the averse affect it will cause on Burma's environment, on Burma's bio-diversity and on Burma's future.
Addition, Burma Democratic Concern (BDC) call for all the people of Burma and justice loving people around the world to boycott Lo Hsing Han and his son Steven Law (a) Tun Myint Naing and Law's wife Cecilia Ng's Companies including Asia World Ltd, Golden Aaron, and Magwe United Football Club.
For more information please contact Burma Democratic Concern (BDC).
Burma Democratic Concern BDC bdcburma Myanmar 1990 election implement result sham 2010 in 2008 constitution beautiful Golden liberty humanity human right rule of law speech press assembly individual rights yes we can water future Thingyan Shakira featuring Freshlyground Waka (This Time for Africa) (The Official FIFA World Cup (TM) Song) Epic Pop Justin Bieber Island Def Jam Avril Lavigne I'm With You Music Video Aung San Suu Kyi Myo Thein Yan Naung non-violence NLD Nobel Prize democracy
Posted by ビルマ民主の懸念 at 23:07 No comments:
Burma Democratic Concern (BDC) Save Irrawaddy Campaign Music Video
Posted by ビルマ民主の懸念 at 23:06 No comments:
မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျဉ်းနဲ့ ရှေ့အလားအလာ၂၀၀၈ နာဂစ်အခြေခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ တွင် တက်လာသော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ တက်လာပါသည်ဟု ကြွေးကြော်ရင်း ဆင်းရဲမှု တိုက်ဖျက်ရေး အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်တွင် စက်တင်ဘာလက ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါ ဖိတ်ခေါ်၍ တက်ရောက်စေခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြောင်းလဲနိုင်သော အခြေအနေသို့ ရောက်နေပြီဟု ယုံကြည်ကြောင်းကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီနေ့တွင်ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလိုက်ပြန်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်ငြိမ်းချမ်းစွာဒီမိုကရေစီစံနစ်ဆီသို့စစ်အာဏာရှင်ချပေးသောလမ်းကြောင်းဖြင့်တရွေ့ရွေ့ဖင်ဒ ရွတ်ဆွဲသွားနေမည်လော?ဧရာဝတီပေါက်ကွဲမှုကြီးဖြင့်လူမှုတော်လှန်ရေးဖြစ်မည်လော?။ စောင့်ကြည့်ရမည့်အချိန်သည်မဝေးတော့ဟုထင် သည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခြေအနေ အချိန်အခါလိုက်ပြီး သင့်တော်လျှေက်ပတ်တဲ့ ပုံစံကို ပြောင်းလဲနိင်ဘို့လိုကြောင်း တချို့ကလည်း ပုံစံမပြောင်းနိုင်ဘဲ ဒီအခြေအနေပဲ ဒီပုံစံ၊ ဟိုအခြေအနေလဲ ဒီပုံစံဘဲ ဖြစ်နေခြင်းသည် ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်း အားနဲသည်ဟု ပြောရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းသည် အတိုက်အခံများဘက်မှ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း ပြောင်းလျှင်ပြောင်းသလို ရွှေ့နိုင်ပြောင်းနိုင်ရမည် (Flexible) တိုးလွယ် ဆုတ်လွယ်ကစားနိုင်ရမည်ဟု ဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ဒေါ်စု၏ ပြောကြားချက်များတွင် မှတ်သားစရာများ၊ သတိပြုစရာများ များစွာပါရှိနေသည်ကို သတိပြုမိဘို့ လိုပေသည်။(၁) ခိုင်မာတဲ့ ဒီမိုကရေစီအဆောက်အဦတွေ တည်ဆောက်ဘို့။(၂) စိတ်ဓာတ်တွေကို ဒီမိုကရေစီစံနစ်နဲ့ ထိုက်တန်အောင် လုပ်ရမည်။ မထိုက်တန်တဲ့ စိတ်တွေကို တော်လှန်ပစ်ရမည်။(၃) ဒီမိုကရေစီ၏ လက္ခဏာသည် အစိုးရအပြောင်းအလဲလုပ်သည့်နေရာတွင် ညင်သာစွာပြောင်းလဲခြင်း၊ သိက္ခာရှိစွာ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်သည်။(၄) လူတိုင်း မိမိကို လေးစားတဲ့၊ တန်ဘိုးထားတဲ့၊ လူရာသွင်းတဲ့ စံနစ်ကို လိုလားမှာဖြစ်သည်။ ဘယ်သူမှ မိမိကို တန်ဘိုးမထားတဲ့ စံနစ်ကို လိုလားမှာ မဟုတ်။(၅) တာဝန်အရလုပ်ရပါသည်ဆိုသည့် နေရာတွင် ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် အများကြီးဆိုင်ကြောင်း၊ အဓိပ္ပါယ်မှာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေသော လူအများစုကို နစ်နာစေသော တာဝန်ကို ပေးအပ်လျှင် ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် စဉ်းစားပြီး လုပ်သင့်မလုပ်သင့် စဉ်းစားဘို့လိုကြောင်း ပြောကြားခြင်းဟု ယူဆသည်။(၆) လူကြီးများ ခလေးများကို အတင်းအကြပ်ပုံစံသွင်းတာသည် မသင့်လျှော်၊ ခလေးလူငယ်များတွင်လည်း သူ့ဟာသူ ဆင်ခြင်ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။ဆိုသည့်အချက် ၆ ချက်ကို အဓိကထား ပြောကြားသွားခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပေသည်။(၁) ခိုင်မာသည့် ဒီမိုကရေစီအဆောက်အဦများ တည်ဆေက်မှုခိုင်မာသည့် ဒီမိုကရေစီ အဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်မှု ဆိုသည်မှာ လွတ်လပ်သော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်းအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ (Civil Society) လွတ်လပ်သော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းများ နိုင်ငံတခုတွင် လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားခွင့်ရလျှင် ထိုအဖွဲ့အစည်းများက မိမိတို့ လူထုလူတန်းစားများ အကျိုးကို ကာကွယ်ရင်း မတရားမှုများကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ တိုင်းပြည်လိုအပ်ချက်များကို ပခုံးထမ်း ဆောင်ရွက်ရင်းဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ အာဏာအလွန်အကျွံ သုံးစွဲမှု မဖြစ်ရန် ဟန့်တားရင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေကို တဖက်တလမ်း ဆောင်ရွက်သဖြင့် တရားရေး မဏ္ဍိုင်ခိုင်မာလာပြီး၊ နိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ကာကွယ်လာနိုင်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး ပြည့်ဝသော နိုင်ငံအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ရရှိပြီးသော ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကိုလည်း မပျောက်ပျက်စေရန် ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်နိုင်ပေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် (Civil Society) လွတ်လပ်သော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်သည့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၊ တောင်သူလယ်သမား အစည်းအရုံးများ၊ စာဖတ်အသင်းများ၊ လူထုလူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းစာနယ်ဇင်းများ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခွင့် မိမိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်များကို ကာကွယ်နိုင်ခွင့်သည် လွန်စွာမှအရေးကြီးသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများအားကောင်းလာစေရန် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အစိုးရများက အားပေးသည်။ ထောက်ပံ့သည်။ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ အကာအကွယ်ပေးသည်။ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်မဖြစ် သိနိုင်ရန် လွတ်လပ်သော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခွင့် ရှိမရှိ။ ရှိနေသာ အဖွဲ့အစည်းများ လှုပ်ရှားနိုင်ခွင့်ရှိမရှိ၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားနိုင်ခွင့် ရှိမရှိဖြင့် တိုင်းတာယူနိုင်ပေသည်။(၂) ဒီမိုကရေစီစံနစ်နဲ့ ထိုက်တန်သော စိတ်ဓာတ်ဒီမိုကရေစီစံနစ်နဲ့ ထိုက်တန်သောစိတ်ဓာတ်ဆိုသည်မှာ အများသဘောကို လိုက်လျောခြင်း၊ လူနည်းစုသဘောကို လေစားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မိမိရှုံသည့်အခါ အသာတကြည် အပြုံးမပျက် လက်ခံနိုင်သည့် ရင့်ကျက်မှုရှိပြီး မိမိနိုင်သည့်အခါတွင်လည်း ရှုံးသူကို နိုင်ထက်စီးနင်းမပြုဘဲ မေတ္တာတရားဖြင့် ဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ ဒေါ်စုက မေတ္တာတရားကို ထားခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံက စံပြအဖြစ်ပြုသင့်သည်ဟုမြင်သည်။ ယနေ့စစ်အာဏာရှင် အသွင်ပြောင်း အရပ်သားအစိုးရသည် ပြည်သူမထောက်ခံဘဲ အာဏာယူထားသည့် အစိုးရဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် ရှုံးနိမ့်လျှင် အတိုက်အခံတို့မှ ပြစ်ဒါဏ်ခတ်လာမည်ကို စိုးကြောက်နေခြင်းကို ဒေါ်စုက မေတ္တာတရားရှေ့ထားပြီး သင်ပုန်းခြေနိုင်ပါသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကောက်ချက်ချမိသည်။ ထို့ပြင် ရှုံးသူကလည်း နိုင်သွားသူနှင့် တိုင်းပြည်အကျိုးကို ရှေးရှုပြီး ပူးပေါင်းလုပ်နိုင်ရမည်ဟု ဆိုလိုကြောင်းသဘောပေါက်သည်။(၃) ဒီမိုကရေစီ လက္ခဏာဒေါ်စုက သူမ အနေနှင့် အစိုးရအပြောင်းအလဲကို ညင်သာသောနည်း၊ သိက္ခာရှိရှိ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြောင်းလဲလိုသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုသို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ၏ ကောင်းမြတ်သောလက္ခဏာတရပ်ဟု မီးမောင်းထိုးပြသည်။ ထိုအချက်သည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရ NLD ပါတီအား အာဏာပေးအပ်ရန် စစ်အစိုးရမှ ငြင်းပယ်ခဲ့ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီလက္ခဏာ မဆောင်၊ လာမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲသည် ဒီမိုကရေစီလက္ခဏာဆောင်ဘို့လိုသည်။ NLD သည် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင် ဆင်နိုင်ဘို့ အားယူနိုင်ဘို့ လိုသည်ဟု ရည်ရွယ်ပြီး ပြောဟန်ရှိသည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကိုလည်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်လာစေချင်လျှင် ညင်သာစွော ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို လေးစားလိုက်နာဘို့ လိုကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးထားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကောက်ချက်ချသည်။ NLD ပါတီဝင်များကိုလည်း နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း ပြောင်းလျှင် ပြောင်းသလို ကစားနိုင်ရမည်၊ ပုံစံပြောင်းနိုင်ရမည်ဟု အသိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်သည်။ ၂၀၀၈ နာဂစ် အခြေခံဥပဒေကို NLD က လက်မခံသော်လည်း ပြောင်းလဲလာသော နိုင်ငံရေးအခင်းအကျဉ်းအရ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်သင့်လျှင် ဝင်ပြီး အာဏာရယူရေးကို စဉ်းစားနေသည်ဟု ထင်သည်။(၄) ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို လူတိုင်းလိုလားသည်လူတိုင်းဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို လိုလားသည်ဟု ဒေါ်စုပြောကြားသွားခဲ့သည်။ လူတိုင်း မိမိကို လေးစားသည့် စံနစ်၊ လူရာသွင်းတဲ့စံနစ်ကို လိုလားမှာဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုချက်သည် ယေဘူယျအနေနှင့် မှန်ကန်သော်လည်း စစ်အာဏာရှင်များ ဘက်မှ ကြည့်လျှင် မမှန်နိုင်ဟုမြင်သည်။ စစ်အာဏာရှင်များအတွက် ၎င်းတို့ ပြုစုပျိုးထောင်ထားသော စံနစ်သည်၊ ၎င်းတို့အတွက် မှန်နေသည့်သဘောဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်ဘဝဖြင့် လုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ရသည်။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်က မိမိကို လူရာထားသည်၊ ရိုသေသည်၊ လေးစားကြသည်၊ လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေဖြစ်သည့် ဘဝဖြစ်သည်။သို့ရာတွင် ၎င်းတို့ဘဝသည် လူထုကြီး၏ လေးစားမှုကို မရသောဘဝ၊ လူထုနှင့် ကင်းကွာပြီး အစောင့်အထပ်ထပ်ကြားမှနေရသော ဘဝ မိမိကိုယ်တိုင်အကျဉ်းသားဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေသောဘဝဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် အာဏာရှိသော်လည်း လူရာဝင်သော်လည်း၊ လူထုကြား မတိုးရဲသည့် ဘဝဖြစ်သည်။ ထိုဘဝမှရုန်းထွက်ရဲသည့်အနေအထားအာဏာယူထားသူများတွင်ရှိ ပြီလားအထူးလေ့လာသင့်သည်။
(၅) တာဝန်အရလုပ်ခြင်းတာဝန်အရလုပ်ရပါသည်ဟု ပြောပြီး အပြစ်မဲ့သူများကို ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ထောင်ချခြင်း၊ နှိပ်စက်ညှုင်းပန်းခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူများကို နည်းမျိုးစုံနှင့် နှောက်ယှက်ခြင်းတို့သည် မှန်မမှန်၊ လုပ်သင့် မလုပ်သင့်ဆိုသည့် ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမရှိ၊ ထိုသူများသည် မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် လုပ်နေခြင်းလော၊ မိမိအပါအဝင်အများကောင်းစားရေးအတွက် လုပ်နေခြင်းလော စသည့် ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် လေ့လာပြီး တာဝန်အရ လုပ်ရပါသည်ဆိုခြင်းထက် ထိုတာဝန်သည် တရားသဖြင့် ပေးအပ်သော တာဝန်လော ဟူ၍ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး မတရားလုပ်ရပ်များလုပ်ရန် ပေးအပ်လာသော တာဝန်များကို ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ငြင်းပယ်နိုင်ရမည်ဟု ဆိုလိုပေသည်။(၆) လူကြီးများက ခလေးများကို ပုံစံသွင်းခြင်းအရှေ့တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုအရ လူကြီးများက ခလေးများကို အတင်းအကြပ် ဖိနှိပ်မှုဖြင့် မိမိတို့လိုရာ ပုံစံသွင်းခဲ့ကြသည်။ အရှေ့တိုင်း ပုံစံသည် အာဏာရှင်ဆန်သည်။ လူကြီးများက ခလေးများထက် ပိုသိသည်မှာ မငြင်းနိုင်ချေ၊ သို့ရာတွင် ခလေးများ သိသမျှတော့ လူကြီးများ အားလုံးမသိနိုင်သည့်အပြင် ခလေးရှုဒေါင့်နှင့် လူကြီးရှုဒေါင့်ခြင်းလည်း မတူနိုင်ချေ။ အိမ်ထောင်တခုတွင် မိဘဖြစ်သူနှင့် သားသမီးဆက်ဆံရေး အရှေ့နှင့် အနောက်မတူပါ။ အရှေ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ငါတို့မင်းတို့ထက်သိတယ်၊ တတ်တယ်၊ မင်းတို့အရင် ထမင်းစားလာတာကွဆိုသည့် အပေါ်စီးဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဖေဖြစ်သူက အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်သဖြင့် မအေလုပ်သူက စားဦးစားဖျားကျွေးသည်။ ခလေးများ အရိုးအရင်းကိုက်ရသည်။ လူကြီးပြောတာကို လိုက်လုပ်ရသည်။ ဆင်ခြေတက်၍မရ။ ကျောင်းတွင်လည်းဆရာ၊ ဆရာမတို့က စာမလိုက်နိုင်လျှင်၊ လစစ်စာမေးပွဲကျလျှင် ကျောင်းအုပ်ကြီးကို ခေါ်ပြီး ကြိမ်နှင့်ရိုက်သည်။ ခလေးများကို လူကြီးများက အကြောက်တရားဖြင့် ဖိနှိပ်ပြီး မိမိတို့၏ အမိန့်ကို နာခံရန် ပုံစံသွင်းခြင်းခံရသည်။ ထို့ကြောင့် အာရှတိုက်တွင် ခလေးများက လူကြီးများ လုပ်သမျှ မှန်မှန်မှားမှား ပြန်လှန်ခြေပ ခုခံခွင့်မရဘဲ ခံကြရသည်။ ဤအတွေးအခေါ်သည် အာရှတိုက်တွင် အာဏာရှင်စံနစ်လွှမ်းမိုးနေမှု၏ အဓိက အကြောင်းတရားထဲတွင် ပါဝင်နေသည်။အနောက်နိုင်ငံများတွင် ဒီမိုကရေစီစံနစ် ထွန်းကားသည်မှာလည်း ၎င်းနိုင်ငံများတွင်းရှိ ခလေးသူငယ်များအပေါ် လူကြီးများ၏ ဆက်ဆံရေးမှာ အာရှနှင့်မတူသည့် အချက်ကလည်း များစွာ အထောက်အကူပြုခဲ့ပေသည်။ ခလေးများသည် အနာဂါတ်ကို ဦးဆောင်မည့်သူများဖြစ်သည်။ ခလေးများသည် ဦးစားပေးအဆင့်ထိပ်တွင်ရှိသည်။ ခလေးများကို ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းမပြုရ။ မိဘက ရိုက်နှက်လျှင် ပုလိပ်ကို ဖုံးဖေါ်၍ တိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပုလိပ်က မိဘကို အရေးယူသည်။ ထို့အတူ ကျောင်းတွင် ဆရာများက ကျောင်းသားများကို မရိုက်ရချေ။ ရိုက်ခွင့်မပြု။ ကျောင်းများတွင် ကြိမ်လုံး မထားရှိချေ။ ဆိုးသွမ်းသော ကျောင်းသားများကို အတန်းထဲမှ ထုတ် ထား ခြင်း၊ အချိန်ပိုကျောင်းတွင် နေစေခြင်းတို့ဖြင့် အပြစ်ဒါဏ် ပေးသည်။မိဘဖြစ်သူက သားသမီးကို အပြစ်ဒါဏ်ပေးလျှင် ၎င်း၏ ရပိုင်ခွင့် မုန့်ဖိုးဖြတ်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများအိမ်သို့ အလယ်သွားခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခြင်း၊ မိမိအခန်းတွင်း၌သာ နေအိမ်တွင် နေစေခြင်းတို့ဖြင့် အပြစ်ပေးသည်။ ခလေးများကို ရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းဆိုသည့် နာကျင်အောင် ပြုလုပ်၍ အကြောက်တရားဖြင့် လိုက်နာစေခြင်းထက် မိမိဘာကြောင့် အပြစ်ခံရခြင်းကို သိသည့် အသိတရားဖြင့် ဆုံးမခြင်းကို ဦးစားပေးသည်။ ထို့ကြောင့် အနောက်နိုင်ငံမှ ခလေးများ လူကြီးသူမများကို မကြောက်ကြချေ။ ရိုတော့ရိုသေကြသည်။ သူတို့ကိုလည်း လူကြီးသူမများက သူတို့မေးမြန်းချင်သမျှကို မေးခွင့်ပြုထားပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြတတ်သည့်အတွက် ခလေးများက မိမိမေးလိုရာကိုသော်လည်းကောင်း မိမိအမြင် မတရားမမျှတဟု ထင်သည့်အရာကို ၎င်းရဲရင့်စွာ ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်တတ်သလို၊ ခုခံချေပပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အတွက် လူကြီးများက ၎င်းတို့မှားယွင်းသည့်အခါ ပြုပြင်နိုင်ကြပြီး တရားမျှတရန် ဆောင်ရွက်ပေးတတ်သည်။မိဘဖြစ်သူက သားသမီးအား ငါ့သားသမီးဖြစ်သည် ငါရိုက်ချင် ရိုက်မည်။ သတ်ချင်သတ်မည် လုပ်၍မရသလို ဆရာများကလည်း ငါ့ကျောင်းသား ငါကောင်းစေချင် လို့ ရိုက်သည်ဟု ဆင်ခြေပေး၍ ရိုက်မရချေ။ လူဆိုသည်မှာ အတ္တရှိသည်၊ ဒေါသရှိသည်၊ မောဟရှိသည်။ ထိုကြောင့် လူကြီးများ အမြဲမမှန်နိုင်သလို ခလေးများအမြဲ မမှားနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ခလေးများကို အကာအကွယ်ပေးသည့် ဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်ပေးထားခြင်းကြောင့် အနောက်နိုင်များတွင် ခလေးများသာမက တိရစ္ဆာန်များအတွက်ပါ ဂုဏ်သရေရှိစွာ နေထိုင်နိုင်ခွင့်ရှိကြသည်။ အနောက်နိုင်ငံ၏ ကောင်းမြတ်သော အတွေးအခေါ်မှာ သားသတ်ရုံသို့ ပို့သော တိရိစ္ဆာန်များကိုပင်လျှင် ကြမ်းကြုတ်သော နည်းများဖြင့် ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်ခြင်းကို တားမြတ်ထားသည်။ ထိုအကြောင်းကို နောက်ဆောင်းပါးတွင် ရှင်းပြပါမည်။အကြောက်တရားဖြင့် လူကြီးပြောသမျှ နားထောင်ပြီး လုပ်ရသော အရှေ့တိုင်းခလေးများနှင့် အနောက်နိုင်ငံရှိ ခလေးများ အဓိက ကွာခြားချက်မှာ မိမိယုံကြည်ရာ မှန်သည်ထင်ရာကို မေးရဲပြောရဲခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ သတ္တိကို လူကြီးများက အမျှော်အမြင်ကြီးစွာဖြင့် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သည်။ ငါ့တို့ ပြောသမျှ လိုက်လုပ်ရမည်ဆိုသည့် အတွေးအခေါ်သည် အာဏာရှင်စံနစ်ကို ရှေးရှုစေသည်ဆိုလျှင် မမှားချေ။ ခလေးဘဝကတည်းက မိမိလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသော ခလေးများသည် ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ယုံကြည်သော ခလေးများ၊ ဒီမိုကရေစီစံနစ်၏ တန်ဘိုးကို လေးစားလိုက်နာသော ခလေးများဖြစ်လာကြပြီး ကြီးပြင်းလာသောအခါ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ယုံကြည်သက်ဝင်ပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ ဖြစ်လာကြသည်။နိဂုံးအားဖြင့် ယနေ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းသည် အမှန်တကယ်အကောင်းဖက်သို့ သွားနေခြင်းလော၊ သို့မဟုတ် ယခင် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ နည်းဗျူဟာအတိုင်း အချိန်ဆွဲရေး လှည့်စားမှုဖြင့် သွားနေခြင်းလော ဆိုသည်ကို အတိုင်းအတာတခုအထိ စောင့်ကြည့်ရန်လိုပေသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနှင့် ဒီရေအတက်အကျကို ထိပ်တန်းမြန်မာခေါင်းဆောင်တယောက်အနေဖြင့် ပါဝင်တိုင်းတာလျက်ရှိသည်။ယခင် ထိပ်တိုက်ပုံစံမှ ယခု ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ မည်မျှ ရိုးသားမှုရှိသနည်း၊ မည်မျှ သတ္တိရှိရှိ ပြောင်းလဲနိုင်သနည်းဟူ၍ အပြုသဘော လုံးဝဆောင်ပြီး လုပ်ဆောင်နေခြင်း၊ လက်တွေ့ ဝင်ကစားနေခြင်းကို နားလည်မှု ပေးသင့်သည်ဟု မြင်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အသက် ၆၆ နှစ်ရှိ ပြီ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သူမအသက် ၇၀ နှစ် ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ နိုင်ငံရေးတက်တက်ကြွကြွ လုပ်နိုင်သည့် သက်တမ်း သိပ်မကျန်တော့ချေ။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို ရည်မှန်း၍ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်သင့်လျှင် ဝင်ဘို့လိုကြောင်း စဉ်းစားထားကောင်း စဉ်းစားထားနိုင်ချြေရှိသည်။ ၂၀၀၈ နာဂစ် အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံနိုင်သော်လည်း ၎င်းအခြေခံဥပဒေကို ပြုပြင်ရန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်၍ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရန် ကြိုးစားပြီး အတွင်းမှသာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဟု တွက်ဆအကောင်း တွက်ဆနိုင်သည်။ ပုံစံခွက်ပြောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ ဤသဘောဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ မည်သို့ ဆိုစေကာမူ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲရန် ဆန္ဒရှိသည်၊ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို အမှန်တကယ် တည်ဆောက်လိုလျှင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားမျာားကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးခြင်းဖြင့်သက်သေပြဘို့ လိုပေသည်။ထို့အတူ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံအရေးအခင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင် အဓိက ပေါက်ကွဲနိုင်သည့် အနုမြူဗုံးကြီးပင်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း၏ မဆင်မချင် ပညာမဲ့ပြောကြားချက်သည် တပြည်လုံးရှိ နိုင်ငံသားများ၊ စီးပွားရေးပညာရှင်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိန်းရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ တောင်သူလယ်သမားများ၊ ရေလုပ်သားများအားလုံးကို တိုက်ပွဲဝင်ရန် တပ်လှန့် နှိုးဆော်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီမြစ်ရေ အလျဉ်သည် မထင်မှတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကို ပိတ်ဆို့တားဆီးနေသည့် မှိုက်သရိုက်စစ်အုပ်စုကို တိုက်စား ရှင်းပစ်နိုင်သည့် အင်အားကြီး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါက ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် NLD သည် ရွေးကောက်ပွဲဝင်၍ အာဏာရယူပြီး ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို အတွင်းမှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ ပြည်ပနိုင်ငံရေး အင်အားစုများသည် ပြောပလောက်သော အင်အားစုအဖြစ် မတည်ရှိနေခြင်းက ၎င်းအခြေအနေသို့ တွန်းပို့ပေးလျက်ရှိပြီး၊ အနောက်နိုင်ငံများ၏ စစ်အုပ်စုကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် တဖြေးဖြေးခြင်း ပြောင်းလဲရမည်ဆိုသည့် အတွေးအခေါ်ရှိသူများ အင်အားကောင်းလာခြင်းကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိအားတရပ်အဖြစ် ဖန်တီးလာခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်မိပေသည်။တဖက်မှာလည်း တိုင်းရင်းသား လုက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စစ်ပွဲများ ပြန်စနေခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းစစ်မီးပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာမည့် နိမိတ်များပြလျက်ရှိပြီး၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အင် အားစုများသည်လည်း ယခင်၎င်းတို့ လုပ်နေကြပုံစံခွက်များမှ မထွက်ပဲ၊ ငါ့မတိုက်သေးသမျှ ငါငြိမ်နေမယ်၊ တခြားအဖွဲ့တွေတိုက်လဲ သူဖာသာသူ ခုခံလိမ့်မယ် ငါတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ သူတို့ လုပ်ရပ်ကိုလှမ်းအားပေး ထောက်ခံလိုက်ရင် ပြီးတာပဲဆိုသည့် ပုံစံမှ သူ့ထိရင် ငါ့ထိသလိုဘဲ၊ သူအလှည့်ပြီးရင် ငါ့အလှည့်လာလိမ့်မယ်၊ ငါတို့ စုပေါင်းတိုက်ကြမှ ဖြစ်မယ်ဆိုသည့် လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ်ပြီး တိုက်ပွဲတကယ်ဝင်မည့် တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဘို့ လိုပေမည်။ အဓိက ဦးအောင်သောင်း မကြာခင်က ဝနယ်မြေ သွားရောက်ချွေးသိပ်ခဲ့ခြင်းကို ဝအနေနှင့် သိသင့်ပေသည်။ ကချင်ကိုတိုက်ရာတွင်လည်းကောင်း ၎င်းရှမ်းကို တိုက်ရာတွင်လည်းကောင်း ဝကို မပါစေချင်သည့် သဘောဖြစ်သည်။ အကယ်၍ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အင်အားစုများ ပူးပေါင်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်လျှင် မြို့များ သိမ်းနိုင်သည်အထိ အခွင့်သာနေသည်ကို တွက်ဆပြီး “ပြည်ထောင်စုကြီးကို ကာကွယ်ရန်” အတွက် ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကြီးကို ဝိုင်းဝန်းအကောင်အထည်ဖေါ်ကြဘို့ လိုသည်။ စစ်ရေးနိမ့်ကျနေသောတပ်၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ခိုင်မာမှုမရှိသော ယနေ့တပ်မတော်ကို ကြေးစားတပ်မှ အမျိုးသားတပ်အသွင် ပြောင်းချင်သော တပ်မှူးများဖြင့် ပူးပေါင်းနိုင်သော အနေအထားသို့ ရောက်ရှိလာရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဘို့ အထူးလိုအပ်ပါပေသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရာလမ်းကို စောင့်စားမနေဘဲ မိမိတို့ ဘက်မှ လုပ်သင့်သည်ကိုလည်းလုပ်ရင်း နိုင်ငံရေး ချိန်ခွင်လျှာကို မြှင့်တင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်ပမှဒေါ်စုလုပ်ရပ်ကို မချင့်မရဲဖြစ်ရင်း ဝေဘန်နေမည့်အစား သူမလုပ်ရပ်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး အားပေးဘို့ လိုအပ်ပေသည်။ထွန်းအောင်ကျော်၁၆ရက်၊ ၉လ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
Posted by ビルマ民主の懸念 at 02:52 No comments:
တာဝန်မဲ့သော ကြံ့ဖွတ်အစိုးရအား ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် ပျက်ကွက်မူအတွက် အပြင်းအထန် ဝေဖန်ရှူပ်ချလိုက်ခြင်း
နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၂ ရက်)
ကျွန်ပ်တို့ Burma Democratic Concern (BDC) အဖွဲ့ကြီးမှ ကြံ့ဖွတ် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း၏ တာဝန်မဲ့သော စကားဖြစ်သည့် မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်မူကို ရပ်တန့်ရန်အစီအစဉ်မရှိပဲ၊ အများပြည်သူလူထုမှ ဆန့်ကျင်နေသည့်ကြားက လက်ရှိကြံ့ဖွတ်အစိုးရသည် မြစ်ဆုံဆည်ကို ပြီးစီးအောင်ဆက်လက်တည်ဆောက်သွားမည်ဟူသော စကားအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ရှူပ်ချလိုက်သည်။
မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများသည် မြန်မာပြည်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်နှင့် မြန်မာပြည်၏ အနာဂတ်အား ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသော ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ခြင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် တောင်းဆိုထားကြပါသည်။ လော်စစ်ဟန်နှင့် ၎င်း၏သား Steven Law (ခေါ်) ထွန်းမြင့်နိုင် ပိုင်ဆိုင်သော Asia World Limitedသည် ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် လက်ရှိကန်ထရိုက်ရရှိထားပါသည်။ ထို့အပြင် ထွန်းမြင့်နိုင်သည် ၎င်း၏ဇနီး စင်ကာပူလူမျိုး စစ်စလီယာအန်း၏ အမည်ဖြင့် အခြာကုမ္ပဏီ၁၀ခု ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးသည်။
မြစ်ဆုံဆည်သည် မေခမြစ် နှင့် မလိခမြစ် ဆုံရာ ၂မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ကချင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော် မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ၂၄မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းဆည်သည် အလျှားအားဖြင့် ၄၉၉ပေ၊ အမြင့်အားဖြင့် ၄၉၉ပေရှိပြီး အထပ်၅၀စာရှိသော အဆောက်အဦးအမြင့်နဲ့ ညီမျှသည်။ ရေကာတာ၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာမှာ ၂၉၅.၈ စကွဲယားမိုင်ရှိပြီး Newyork မြို့၏ အရွယ်အစားနီးပါးခန့်ရှိပါသည်။ ထိုရေကာတာ၏ အမြင့်ဆုံးရေအနက်မှာ ပေ၉၅၀ခန့်ရှိပြီး ၆၆ထပ်ရှိသော အဆောက်အဦးအမြင့်နဲ့ညီမျှပါသည်။ ထို မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်၍ ကုန်ကျငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၆ ဘီလီယံ ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းကြပါသည်။ စုစုပေါင်း ဆည်၇ခု နှင့် လျှပ်စစ်ဓတ်အားထုတ်လုပ်မည့် ပရော့ဂျက် ကုန်ကျငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀ဘီလီယံ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤ မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေး ပရော့ဂျက်ကြီး တစ်ခုလုံး၏ တရုတ်ဘက်မှ အဓိက ကန်ထရိုက်မှာ China gezhou-ba group corporation (CCGC) ဖြစ်ပြီး မြန်မာဘက်မှ Asia World Company ဖြစ်ပါသည်။ လော်စစ်ဟန်၏ စီးပွားရေး အင်ပိုင်ယာမှာ ဘိန်းကုန်ကူးခြင်းဖြင့် ချမ်းသာလာသည်ဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၆၀ဝန်းကျင်က ကိုးကန့်ဒေသ မြောက်ပိုင်း၌ စစ်သွေးကြွခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏မြောက်များလှစွာသော Network များဖြင့် ထိုင်းမှတစ်ဆင့် ဘိန်းကုန်ကူးမူကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရမှ ၎င်းအား ဘိန်းဘုရင်အဖြစ် ၁၉၇၀၌ သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ခုနှစ်၌ ၎င်းအဖွဲ့သည် အရှေ့တောင်အာရှ၌ လက်နက်အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ထားသော ဘိန်းကုန်ကူးအဖွဲ့ အဖြစ် ယုံကြည်ကြသည်။ Asia World Company၏ အခွဲဖြစ်သော Golden aaron Companyသည် တရုတ်ပြည်နဲ့ ဆက်စပ်လျှက်ရှိသည်။
ထွန်းမြင့်နိုင်သည် Golden aaron Company၏ မန်းနေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းCompanyသည် တရုတ်ပြည်၏ China National Offshore Oil Corporation (CCOOC) Companyနဲ့ ဆက်စပ်လျှက်ရှိသည်။ လော်စစ်ဟန်နှင့် ၎င်း၏သား Steven Law (ခေါ်) ထွန်းမြင့်နိုင် နှစ်ဦးစလုံးကို ဘိန်းကုန်ကူးမူကြောင့် ၁၉၉၆ခုနှစ် ကတည်းက အမေရိကန်အစိုးရမှ ဗီဇာမပေးပဲ Black List သွင်းထားခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၎င်းတို့ နှစ်ဦးစလုံးကို အမေရိကန်စီးပွားရေးဌာနမှ စီးပွားပိတ်ဆို့သော နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းကာ ၎င်းတို့၏ Asia World Company Limited၊ Asia World Industry Limited၊ Asia World Light Limited တို့အားလုံးသည် စစ်အစိုးရနှင့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ငွေကြေးဆက်နွယ်မူရှိကြောင်း ထင်ရှားပေါ်လွင်ခဲ့သည်။ Asia World Company Limited သည်မြန်မာပြည်၏ အကြီးဆုံးစီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်ပြီး စက်မူလက်မူ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် နှင့် စူပါမားကက်ပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရွှေတွင်းပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထွန်းမြင့်နိုင်သည် မြန်မာ national league ၌ ဘောလုံးကစားသော မကွေးယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ကို ကယ်တင်ခြင်းသည် မြန်မာပြည်ကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုသို့ကယ်တင်ရန်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ပ်တို့အနေဖြင့် တရုတ်ပြည်၏ China Gezhou-ba Group Corporation (CCGC) နှင့် China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) တို့အား မြန်မာပြည်မှ ဘိန်းရာဇာများ နှင့် အဆက်အသွယ်မလုပ်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ကျွန်ပ်တို့Burma Democratic Concern (BDC) အဖွဲ့ကြီးအနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံး နှင့် တရားမျှတမူကို မြတ်နိုးသော ကမ္ဘာသူ၊ကမ္ဘာသားအပေါင်းတို့အား လော်စစ်ဟန်နှင့် ၎င်း၏သား Steven Law (ခေါ်) ထွန်းမြင့်နိုင်၊ ထွန်းမြင့်နိုင်၏ ဇနီး စင်ကာပူလူမျိုး စစ်စလီယာအန်း တို့ပိုင်ဆိုင်သော
Asia World Company Limited၊ Golden aaron Company နှင့် မကွေးယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းတို့အားလုံးကိုသပိတ်မှောက်ရန်တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် ဧရာဝတီမြစ်ကြီး တိမ်ကောပပျောက်အောင်လုပ်ဆောင်မူနှင့် မြန်မာပြည်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ် ပျက်စီးအောင်လုပ်ဆောင်မူတို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် ကမ္ဘာသူ၊ကမ္ဘာသားအပေါင်းတို့အား မြန်မာပြည်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်သာမက တကမ္ဘာလုံးအား ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အကျိုးသက်ရောက်စေမည့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်မူ အပေါ် မစ္စတာ ဘန်ကီးမွန်း အပါအဝင် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များမှ ဝိုင်းဝန်းပါဝင်တားဆီးပေးပါရန် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
(၁) Asia World Company Limited နဲ့ အဆက်အဆံမလုပ်ရေး
(၂) လော်စစ်ဟန်နှင့် ၎င်း၏သား Steven Law (ခေါ်) ထွန်းမြင့်နိုင် နဲ့ အဆက်အဆံမလုပ်ရေး
(၃) မကွေးယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းအား အားမပေးရေးတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
Posted by ビルマ民主の懸念 at 16:34 No comments:
Posted by ビルマ民主の懸念 at 13:00 No comments:
Bayda Institute စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေးသင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား
၁။ အခမ်းအနား ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။
၂။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဌ ဘဘ ဦးတင်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။
၃။ Bayda Institute ရဲ့ အမှုဆောင် Director အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်ဦးမှ နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကားပြောကြားခြင်း။
၄။ သင်းတန်းဆင်းလက်မှတ်များအား ( ဦးတင်ဦး၊ ဦးအုံးကြိုင်၊ ဦးဝင်းထိန်၊ ဦးစောနိုင်းနိုင်း၊ ဦးဝင်းထိန်၊ ဒေါ်မေ၀င်းမြင့် အစရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များမှ) ပေးအပ်ခြင်း၊
၇။ သင်တန်းသား/သူများ ကိုယ်စား သင်တန်းသားများမှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခြင်း။
၈။ Bayda Institute ၏ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကိုကိုမြင့်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်း။
၉။ Bayda Institute သင်တန်းသား၊သူများမှ “We shall overcome” သီချင်းဖြင့် သီဆိုဧည့်ခံခြင်း။
၁၀။ အခမ်းအနား ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာခြင်း။
Political Science သင်တန်း အပါတ်စဉ် ၇ မှ သင်တန်းသား၊သူ ၁၃ ယောက်နှင့် CSO Networking and Democracy သင်တန်း အပါတ်စဉ် ၂ မှ သင်တန်းသား၊သူ ၁၈ ယောက် စုစုပေါင်း ၃၁ ယောက်အား သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်များ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by ビルマ民主の懸念 at 16:00 No comments:
There will be course completion ceremony for two courses , Political Science 45 days course and CSO , Networking and Democracy5day intensive course ( for Mandalay Division) at bayda institute from 9.00 am to 12.00. And You are cordially invited.
Posted by ビルマ民主の懸念 at 06:13 No comments:
The Statement of 88GS on Irrawaddy Dam Issue Shwe Mann Speech Aug 22 in Nay Pyi Taw DKBA Attitute on U Thein Sein's Peace Keeping Process NLD Statement 22 Aug 2011
Posted by ビルマ民主の懸念 at 01:18 No comments:
Course completion ceremony for CSO , Networking and Democracy Course.
We are going to hold course completion ceremony for CSO , Networking and Democracy Course.
This course is especially designed for building Democracy Network nationwide .
This is the first Batch , the participants are from Kachin Democracy Network.
Participants from all States and Divisions will join the course as planned , Second Batch is from , Sagaing Division.
If you want to know more information, pls contact U Aung Kyi Nyunt ,Director and Spoke person of the BAYDA Institiute and U Ko Ko Myint ,Head of Institute.
U Aung Kyi Nyunt : 09 731 41295U , Ko Ko Myint 09 49501030
Posted by ビルマ民主の懸念 at 06:08 No comments:
Posted by ビルマ民主の懸念 at 06:06 No comments:
Former Political Prisoners & 88 Generation Students Leaders inside Burma
The photos of Former Political Prisoners & 88 Generation Students Leaders inside Burma. Some are serving 65 years prisoner term. Min Ko Naing, Ko Ko Gyi, Myo Yan Naung Thein, Ko Soe Htun and other leaders at Maggin Monestry.
Posted by ビルマ民主の懸念 at 15:36 No comments:
Posted by ビルマ民主の懸念 at 08:30 No comments:
Posted by ビルマ民主の懸念 at 03:57 No comments:
Income Tax being Paid by Private enterprises engaged in CMP system
Yangon, August 18 -- Income tax being paid by private enterprises engaged in CMP system ( Cutting, Making and Packing ) has been reduced from 10 per cent to2per cent within six months period from August 19, 2011 to February 18, 2012, the Finance and Revenue Ministry announced over the state-owned TV at6pm ( MST ) this evening.
Likewise, regarding the income tax of Myanmar nationals earning foreign currencies within the country or in foreign countries, the tax on their income will be reduced from 10 per cent to2per cent within six months period from August 19, 2011 to February 18, 2012, the TV announced quoting the order of Ministry of Finance and Revenue.
The CMP system is mostly practised by garment factories, which receive material from foreign countries. These factories are merely engaged in the work of cutting, making and packing. After that these factories got to send these packages to such countries as Republic of Korea, Taiwan etc.
Yangon, August 18 -- The Union Government of Thein Sein this evening issuedapeace overture to all ethnic armed organizations with an aim to putastop to all armed conflicts with them so that the government would be able to build peaceful and developed nation, the state-owned TV announced at6pm ( MST ) this evening.
The peace overture as announced by the state-owned TV Myanmar this evening included three following points. 1. As internal peace is essentially needed, the government is determined to putastop to all armed conflicts so that it would be able to build peaceful and developed nation without hindrance;
2. All ethnic armed organizations desiring peace are invited individually to takeapreliminary step by contacting the governments of region or state concerned; After receiving such contacts individually from these ethnic armed organizations, the Union Government will be forming the negotiating teams for carrying out necessary negotiations with each of these ethnic armed organizations.
Posted by ビルマ民主の懸念 at 07:05 No comments:
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီသတင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ သင်တို့ဆီသို့Power Point Presentation, Life is beautiful
ဆိုပြီးမေးလ် တစ်ခုဝင်လာပါခဲ့လျှင် မဖွင့်ပါနှင့် ချက်ချင်းdeleteလုပ်ပစ်ပါ။ သင်ထိုမေးကိုဖွင့်ခဲ့မိလျှင်
သင်၏computer secreen တွင် It is too late now, your life is no longer beautiful ဆိုသည့်စာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ထိုအခါသင်၏PCမှအရာအားလုံးပျောက် ဆုံးသွားပြီး ဒီမေးလ်ကိုပို့သူထံ သင်၏ အမည်၊ e-mail နှင့် password အားလုံးရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်။ သည်အရာသည် အင်္ဂါနေ့ နေ့လည်က စတင်ခဲ့သော virus အသစ်ဖြစ်ပါသည်။
Virus ဖန်တီးသူကတော့ life owner ဟု မိမိကိုယ်ကိုအမည်ပေးထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သည်မေးလ်ကိုချက်ချင်ုးလက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ။
Posted by ビルマ民主の懸念 at 16:08 No comments:
Posted by ビルマ民主の懸念 at 07:51 No comments:
။မြစ်ဆုံရေကာတာ(Myintson Dam) ကြောင့်လတ်တလောပြည်သူတွေခံစားရမဲ့ဒုက္ခများနှင့်
(၁)Impact area မှာပြည်သူတွေဘယ်လောက်ထိခိုက်ဆုံးရှူံးပြီးလူတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့
Three Gorges Dam ကြီးတည်ဆောက်ခဲ့သလဲ၊အခုအဲဒီ Three Gorges Dam ကြီးအကျိုးနဲ့အပြစ်
တနည်းနည်းနဲ့တော်စပ်မည်ထင်ပါသည်။တရုတ်အစိုးရဲ့ (Political Game)ဆိုတာထည်စဉ်းစားရင်
သစ္စာတော်ခံloyalist ဆောင်းပါးရှင်အား သိစေအပ်ပါသည်။ (မောင်သာမြား)
မြစ်ကောမယ့်နေ့။ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
Posted by ビルマ民主の懸念 at 14:29 No comments:
'88 Generation Students' Leaders Welcome Suu Kyi, Aung Kyi Talks
Imprisoned dissidents who are leaders of the 88 Generation Students group reportedly welcomed the recent meeting between pro-democracy leader Aung San Suu Kyi and Aung Kyi, Burma's minister of labor as well as minister of social welfare, relief and resettlement, and urged more pro-active dialogue aimed at national reconciliation.
Min Ko Naing, Ko Ko Gyi and Htay Kywe, all of whom are serving 65-year priosn sentences, managed to get their comments to the public one week after the first meeting between Suu Kyi andamember of Burma's new government took office in late March.
Min Ko Naing, who is being held in Keng Tung Prison in eastern Shan State, said through an information channel that he thinks the meeting between Suu Kyi and Aung Kyi was “a good step.”
A message from Ko Ko Gyi, who is in Mong Set Prison in Shan State, said he supports the meeting and calls for more meaningful dialogue. Ko Ko Kyi, who is described by colleagues asa“strategist,” said that the pro-democracy leader should takeawider leading role in the development of democracy and peace in Burma.
Htay Kywe’s brother-in-law, Pyo Min Thein, who is also member of the 88 Generation Students group, told The Irrawaddy on Thursday that Htay Kywe said the meeting between Suu Kyi and Aung Kyi wasapositive step. Htay Kywe is serving his sentence in Buthitaung Prison, Arakan State.
“Even though the 88 Generation Students leaders have sacrificedalot for the country, they are always optimistic. Therefore our party take their concerns seriously,” said Win Htain, one of Suu Kyi’s close aides at the National League for Democracy(NLD), in response to the 88 Generation Students leaders’ messages.
The 88 Generation Students group was formed by former student leaders who led the mass uprising against dictator Ne Win’s Burmese Socialist Programme Party in the summer of 1988, during which at least 3,000 people were killed by government security forces.
Throughout 1988-1991, most of the student leaders were arrested and given long prison sentences. Min Ko Naing was arrested in 1989 and spent 15 years in prison. Ko Ko Gyi was arrested in 1991 and imprisoned and released in 2005.
After their release, the former student leaders formed the 88 Generation Students group, which becameaprominent dissident movement while Suu Kyi was under house arrest. The group undertook various political activities until its leaders were once again arrested on August 21, 2007 for their involvement inaprotest march against fuel price hikes and given matching 65-year sentences.
The former student leaders reportedly take the same position—that they will not make an appeal to get individual sympathy from the government.
Posted by ビルマ民主の懸念 at 05:22 No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေး ရှေးရှုဖို့ ရှစ်လေးလုံး အထိမ်းအမှတ်နေ့ ဒေါ်စုပြောကြား
ဒီနေ့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူတွေက စုပေါင်းကျင်းပတဲ့ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၃ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုတဲ့၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အခမ်းအနားမျိုး ဖြစ်ဖို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ရှစ်လေးလုံး အထိမ်းအမှတ်နေ့ကို ကြည့်မြင်တိုင် နတ်စင်လမ်းမှာရှိတဲ့ သာဓု ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားကို ၁၉၈၈ အရေးအခင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေထဲက အကျဉ်းကျခံမနေရဘဲ အပြင်မှာ ကျန်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေအပြင် ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ဦးစီးပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သလို ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုတဲ့ အခမ်းအနားဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး ကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ အခမ်းအနား ဖြစ်မြောက်ရေး တာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်းက ပြောပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားကို လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်လာသလို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ၊ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ၊ အကျဉ်းသား မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ၈၈ အရေးအခင်းကာလမှာ လှုပ်ရှားခဲ့သူ ထောင်နဲ့ချီပြီး တက်ရောက်လာတာ တွေ့ရတယ်လို့ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုံခြုံရေး တာဝန်ခံ ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။
“ဒီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခမ်းအနား လာတက်တယ်။ နောက် NLD က ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဦးတင်ဦး၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းတင်တို့ အပြင်ကို တခြားပါတီက ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ပါတယ်။ အသက်အရွယ် မျိုးစုံက လူတွေက ဒီအခမ်းအနားကို တလေးတစားနဲ့ အထူးဂုဏ်ပြုပြီး တက်ရောက်ကြတယ်လို့ သဘောပေါက်ပါတယ်။ စည်းစည်းလုံးလုံးပဲ ပါတီက လူတွေရော၊ ပါတီမဟုတ်ဘဲနဲ့ လူတွေရော ဒီနေ့ အမှတ်တရ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ကြက်ပျံမကျ စည်ကားတယ်ပေါ့။ လူတွေ ထောင်နဲ့ချီပြီး တက်ရောက်ကြတယ်။”
အခမ်းအနားမှာ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ကိုတိုးကျော်လှိုင်က ဒီမိုကရေစီ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ အသက်ပေးသွားသူတွေကို ရည်စူးပြီး တမိနစ် ငြိမ်သက်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ဦးဆောင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သာဓု ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်ရဲ့ ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂံသက အတွေးရဲကြဖို့၊ ခြောက်တိုင်းမကြောက် မြှောက်တိုင်း မမြောက်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်နိုင်ကြောင်း တရားကို ဟောကြားခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဆရာတော်ကြီးက အတွေးရဲဖို့ တွေးတတ်ရမယ်၊ တွေးတဲ့အခါမှာလည်း ပေါက်မြောက်အောင် တွေးရမယ်၊ ပေါက်မြောက်အောင် တွေးတဲ့အခါမှာ ပြောတာကိုယုံပြီး ခြောက်ရင်လည်း မကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်လွတ်လပ်တဲ့ အမြင်မျိုး ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး။ ဒါကိုလည်း ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နှစ်ခြိုက်ပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ကျနော်တို့ကိုလည်းပဲ ပြောပြပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးကိုလည်း ပြောပြပါတယ်။
“တရားက ကောင်းပါတယ်တဲ့၊ တရားက ဟိုဘက်ရော ဒီဘက်ရော မျှပြီး ဟောပါတယ်။ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေကိုလည်း အတွေးရဲဖို့ပေါ့။ အတွေးရဲတဲ့အခါမှာ ကြောက်လည်း မကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်း တရားလေး ဟောသွားပါတယ်။ တရားလေးက အတော့်ကို ထိမိပါတယ်။”
အခုလို ပရိသတ် အများအပြား တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ၂၃ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အာဏာပိုင်တွေဘက်က တားဆီး နှောင့်ယှက်မှုမျိုးတော့ မတွေ့ရဘူးလို့ ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။
“ဒီအခမ်းအနားနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခမ်းအနား ကာလမှာလည်း လုံခြုံရေး ဘယ်လိုလုပ်မယ်၊ နောက်တခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ရင် ထုံးစံအတိုင်း လူတွေက ၀ိုင်းအုံတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဆိုတဲ့ဟာက မနေ့ကတည်းက ဆွေးနွေးပြီးသားပါ။ ဒီနေ့မနက်မှာလည်း ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ အပြင် ကျနော်တို့ NLD က လူငယ်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ လုံခြုံရေး လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အေးအေးဆေးဆေး၊ အနှောင့်အယှက် ကင်းကင်းနဲ့ ပြီးသွားတာပါ။”
ဦးဝင်းထိန် ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ビルマ民主の懸念 at 10:01 No comments:
Action expresses priorities. - Mohandas K. Gandhi
If no one answers your call, walk alone. - Rabindranath Tagore
What happens in Egypt doesn't stay in Egypt. - Tom Friedman (columnist for The New York Times)
The power of the people is much stronger than the people in power. – Wael Ghonim, Egyptian activist/leader
The cost of liberty is less than the price of repression. - W. E. B. DuBois
A ship is safe in harbour, but that's not what ships are for. - William Shedd
– Thomas Jefferson (1743-1826), author of the Declaration of Independence and 3rd president of the United States
An invasion of armies can be resisted, but there is no resistance to an invasion of ideas. – Victor Hugo (Comment: Let truth be the invader … let facts be the bullets that slay every fallacy … because all that is false, and all that rests on what is false - including governments – isahouse of cards that cannot stand.)
It is 30 years since we started this work. Activities that devastate the environment and societies continue unabated. Today we are faced withachallenge that calls forashift in our thinking, so that humanity stops threatening its life-support system. We are called to assist the Earth to heal her wounds and in the process heal our own – indeed, to embrace the whole creation in all its diversity, beauty and wonder. This will happen if we see the need to revive our sense of belonging toalarger family of life, with which we have shared our evolutionary process. In the course of history, there comesatime when humanity is called to shift toanew level of consciousness, to reachahigher moral ground. A time when we have to shed our fear and give hope to each other. That time is now. - Wangari Matthai, Nobel Peace Prize Acceptance Speech
… the old Lakota was wise. He knew that man’s heart, away from nature, becomes hard; he knew that lack of respect for growing, living things soon led to lack of respect for humans too. So he kept his youth close to its softening influence. – Luther Standing Bear
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. - Mohandas K. Gandhi
…alily orarose never pretends, and its beauty is that it is what it is. – J. Krishnamurti
I see little of more importance to the future of our country and our civilization than full recognition of the place of the artist. If art is to nourish the roots of our culture, society must set the artist free to follow his vision wherever it takes him ... the highest duty of the writer, the composer, the artist is to remain true to himself and to let the chips fall where they may. In serving his vision of the truth, the artist best serves his nation. And the nation which disdains the mission of art invites the fate of Robert Frost's hired man, the fate of having "nothing to look backward to with pride, and nothing to look forward to with hope". - President John F. Kennedy, Remarks at Amherst College, October 26, 1963
The future isn’t in the future – we’re creating it now!
Posted by ビルマ民主の懸念 at 17:42 No comments:
Burma Insight: Daw Aung San Suu Kyi met with Aung kyi
Yangon, July 25 -- Following one hour and ten minutes long talks between leader of the democratic opposition Aung San Suu Kyi and Representative of Thein Sein government Union Minister for Labour Aung Kyi at the Green Bank State Guest House beside the Inya Lake in Yangon this afternoon, Minister Aung Kyi announced that this talks represented the first step towards matters of cooperation and those of carrying out future tasks.
This announcement, which has all the characteristics of the beginning of the breakthrough between democratic opposition and the new government, was emphatically made by Minister Aung Kyi to the awaiting newsmen, who had been awaiting within the compound of the State guest house since the start of the talks.
Speaking on her behalf to the newsmen, Aung San Suu Kyi said: “As for me, I always look forward to the interests of the country and the equality of the people. I do hope that this talks will benefit the country.”
Aung Kyi is notastranger to Aung San Suu Kyi. While serving as Minister for Labour under SPDC government, Aung Kyi was concurrently assigned as Minister for Relations between the military junta and Aung San Suu Kyi.
In this capacity Aung Kyi had held talks with Aung San Suu Kyi for nine times during the time of the military junta. His last talks with Aung San Suu Kyi was late in 2009.
This afternoon after the talks, Minister Aung Kyi himself read out the official news statement on the talks with Aung San Suu Kyi as follows:-
“At the invitation of the Government of the Republic of the Union of Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi has come to Green Bank State Guest House this afternoon and held official talks with Union Minister U Aung Kyi from 1 pm to 2:10 pm this afternoon.
“Both sides looked upon this meeting as positive one and as such both sides were satisfied with the results.
“Both sides discussed possible areas where they could cooperate for the good of the people.
“In discussing as such, matters concerning rule of law, eradication of misunderstanding and other matters for the good of the people were included.
“Both side agreed to meet again at an appropriate time.”
The above is the full-text of the news statement read out by Aung Kyi.
Posted by ビルマ民主の懸念 at 05:46 No comments:
Burma Democratic Concern (BDC) Twitter
Burma Democratic Concern (BDC) Flickr
Inviting the Celebration of Burma Resistance Day, ...